qowladda Pachinko ah qaababka gobolka (faraqa u ah siyaasadda ganacsiga by magaalooyinka iyo miyiga)
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ qowladda Pachinko ah qaababka gobolka (faraqa u ah siyaasadda ganacsiga by magaalooyinka iyo miyiga)
Tan iyo waa qowladda pachinko ah sidoo kale waa shirkad ganacsi, ma dukaamo run ayaa badisay kaliya macaamiisha. Sidaa darteed, warshadaha kale, aynu ka hawl kasta oo siyaasadda iibka dukaanka. Waxa kale oo jira qayb tiirsan in ratio lacag caddaan ah iyo wixii la mid ah, laakiin dabeecadaha gobolka waxaa laga arki karaa inta badan ee siyaasadda ganacsi.
Maxaa dhacaya haddii farqiga u dhexeeya, aynu kula farqiga u ah ganacsiga ee dukaamada magaalooyinka iyo dukaamada maxaliga ah marka la barbar dhigo.
in macaamiisha reer magaalka iyo reer miyiga, tixraaca kala duwan si ay u doortaan qowladda pachinko ah. macaamiisha Urban, laakiin u iman doonaan inay qowladda pachinko ah inay ujeedadoodu tahay inay ku guuleystaan, waxa aan soo socda in dukaanka ujeeddo ah ciyaaro badan ku guuleysan macaamiisha maxaliga ah. Farqiga Big soo bixi doonaan qaar ka mid ah waxaa ka. hawlaha ka hawlgala waxaa ka mid ah, laakiin waxaa jira jawi kala duwan samaynta sida adeegga macaamiisha iyo dukaanka, waxaa jira inta jeer gaar ah in ay soo saaraan soo noqnoqoshada iyo Ball weyn sida farqiga u dhexeeya bedelka Xintai. In tii pachinko
, si ay u kordhiyaan faa'iido qalliinka waxaa la odhan karaa hawlaha qalliinka lagama maarmaan. bedelka dukaamada Urban Xintai waxa inta badan lagu sameeyaa. Xataa joornaalada xirfadleyda sida hadda, si fudud loo habeeyey in macluumaadka Xintai loo arki karaa, macaamiisha magaalooyinka aad doonayo in uu ku dhuftay miiska ugu dambeeyay. Tartanka dukaan ku wareegsan
waa, mar soo bandhigay heerka ugu dambeeyay ee goor hore, si ay u soo jiitaan macaamiisha dukaankiisa doono dabcan dayrta. Macaamiisha aan soo socda ma qabanayo ganacsi. Si aanay u xaaladda noocan oo kale ah, adopter hore ee madal ugu danbeeyay inay u tartamaan, waxaa loola jeedaa in hogaanka ay u soo jiitaan macaamiisha.
Si kastaba ha ahaatee, si ay u soo bandhigaan, mashiinada cusub qaadi doono qiimaha weyn. Dabcan, kharashka waa in sidoo kale la sara kicin kabsaday faa'iidada. Ujeedada this, taasoo ah magaalada dukaanka aan la bakhtiin karo kubada mar kasta oo ay dhacdo, waxaanu kubad wakhtiga xallinta deficit kaliya ee dhacdooyinka daran. magaalada
qowladda pachinko waa for soo jiidashada macaamiisha, daah-badan oo ka mid ah dhacdooyinka, sidoo kale waxaa jira dukaan inay sameeyaan ogyn ee dukaanka. Had iyo jeer waa ay adag tahay si ay u muujiyaan heshay gaar ah, muuqaalada magaalada qowladda pachinko siyaasadda ganacsiga waa weyn ama in uu racfaan ka Xintai ah, dad badan oo lala iman lahaa dhacdooyinka la filayaa in ay soo jiitaan macaamiisha, waa in waxyaalahan oo kale si ay racfaan. Dukaanka maxalliga ah in ay lid ku ah, bedelka Xintai waa dhawr jeer muddo bil ah. bedelka hadalno Rare iyo
, laakiin waxaa kale oo suuragal ah inay soo bandhigto madal ugu dambeeyay, ugu noqon doonaa hordhaca ah ee miiska loo isticmaalo. taagan isticmaalay marka la barbar dhigo taagan ugu dambeeyay, waxaan kharash la yareeyo. Sidaa aawadeed, ma aha oo kaliya ay dhacdo, ay noqon doontaa suurto gal ah si ay u bixiyaan heshay xasiloon ka caadiga ah.
sidoo kale ka salka macaamiisha ah, dukaanka si racfaanka in ciyaaro ah kubada kirada hooseeyo badan, diiradda saaraan halka macaamiisha in low-soo laabtay ayaa sidoo kale mar walba caddayn u ciyaaro hawlaha halista hoose. Dabcan, dukaanka sidoo kale laakiin waa u faa'iido ka yar hal maalin si la mid ah, waxa ay noqon doontaa hawlgal deggan iyo faa'iidada sida loo dhawro karo.
si deggan in ay soo saaraan faa'iido ah, marka la barbar dhigo dukaamada magaalooyinka ay dhacdo, in la qabto dhacdooyinka Gase in gacangelin macaamiisha ku noqon lahaa wax ka yar.
in tii pachinko, sidaas darteed waxaa jiri doona habka ugu of kala duwan ee iibka, laakiin dhan qowladda pachinko ma aha run, sidan ka faraqa u ah xaaladaha goobta iyo macaamiisha of layers ah, magaalada tii pachinko iyo qowladda pachinko degaanka iyo in uu yahay in ay jiraan siyaasadda ganacsiga aasaasiga ah waa ka duwan yahay.
ku hay in aad sheegtay waxaa, waxaa laga yaabaa in oo u arkay style ganacsiga ee Pachinkoya, heshay, dhacdooyinka, iwm, aragto in dukaanka wax Waxaan u maleeyay in ilaa hadda ma ahaa waa dukaamada aad u fiican la yaab leh Waxaa falaa. x000D_ deggan, waayo, waxtar buu, xataa haddii ay dhacdo marka loo eego magaalada dukaanka, in la qabto dhacdooyinka Gase in gacangelin macaamiisha ku noqon lahaa wax ka yar.
ku hay in aad sheegtay waxaa, waxaa laga yaabaa in oo u arkay style ganacsiga ee Pachinkoya, heshay, dhacdooyinka, iwm, aragto in dukaanka wax Waxaan u maleeyay in ilaa hadda ma ahaa waa dukaamada aad u fiican la yaab leh Waxaa falaa.